JUNE&MAY: # ပုဇွန်ဒုံးခြောက်
မနေ.က အမျိုးတွေ မြန်မာပြည်က ပြန်လာလို. လူကြုံပေးလိုက်တဲ.အထုပ်ကိုသွားယူတယ်။အဲဒီ.ထဲမှာ
အိမ်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ "ပုဇွန်ဒုံးခြောက်"ပါတယ်။ပုဇွန်ဒုံးခြောက် ဆိုတာ ပုဇွန်ခြောက် နဲ.မတူပါဘူး။
ပုဇွန်ခြောက် က ပုဇွန် ကို ပြုတ် ...နေလှန်းပြီး ခြောက်တော. ပီနံအိတ်ထဲထည့် ပြီး အခွံကွာအောင်အ
ပြင်ကနေ တုတ်နဲ.ရိုက်...နောက်ဆုံး ဖွဲခွံတွေကို ပြာထုတ်ပြီး ပုဇွန်ခြောက်ဖြစ်လာတာပါ။ပုဇွန်ဒုံးခြောက်
ကတော့ ငါးခြောက်လုပ်ပုံနဲ.တူတယ်။ပုဇွန် ကို ခေါင်းဖြုတ်၊အခွံခွာပေမယ့် အမြီးကိုချန်ထားပြီး ဆားနယ်
ပြီး နေ လှန်းလိုက်တာ။စားခါနီးမှ မီးဖုတ်စားစား၊ဆီပူပဲလှိမ်.လှိမ့် စားလို.ကောင်းပါတယ်။မြင်သာအောင်
ပြောရရင် ပုဇွန်ငါးခြောက် ပေါ.။တို.ရွာမှာseafood ဟာ very cheap ပါ။
ဒါက အကောင်ကြီးလို. ငါးခြောက်လို ထက်ခြမ်းခွဲထားတာ။
..... ငှက်ပြောကြော်......၀က်အူချောင်း..... ၀က်ခေါက်ကြော် .......ငါးဖယ်ယောင်းငပိကောင်
ဒါက ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ် ၊အမဲကြော် နဲ.ပုဇွန်ခြောက်(အိမ်ကပေးလိုက်တာ)
ဒါက chinese newyear ကျရင် ကန်တော.ဖို. မှာလိုက်တာ။
chinese newyear ကျရင် လာခဲ့နော် blog မှာ ကျွေးမှာ။
Posted by JuneOne at 12:37 PM
ThuHninSee January 12, 2009 at 12:58 AM
ကြွားတယ်ပေါ့နော်။ ရပါဒယ်။ ရှောက်သီးနဲ့ ဟလ၀ါ နည်းနည်းယူသွားမယ်နော်။
ရခိုင်ဘက်က ပုစွန်ဒုံးခြောက် အကောင်ကြီးတွေ
ခိုးစားမိလို့ အပိန့်တွေပြီး ဆေးကုရတဲ့အချိန်လေးကိုပါ
JuneOne January 12, 2009 at 7:58 AM
ဘလော့ မှာပဲကျွေးမှာလား? အိမ်မှာလာစားမယ်လေ... :P
JuneOne January 12, 2009 at 11:11 AM
Anonymous 'လာနိုင်ပါတယ် အချိန်တိုင်းပဲ' ဒါပေမယ်.နောက်ကျ၇င် အပေါက်ဝက လှည့်ပြန်ရမယ် နော်။blog ပေါ်မှာ ဆို အစအဆုံး အကုန် ကြိုက်တာ တီးလို.ရတာပ။
sin dan lar January 14, 2009 at 5:32 PM
အဟင့်... လူကြုံရှားလို့ ငတ်နေချိန်ကျမှ........
ဟာလ၀ါ၊ ငါးပိကောင် ၊ ငှက်ပျောခြောက်.... အီးးးးးးး
Yin Yin January 15, 2009 at 10:23 AM
u forgot beer.
JuneOne January 15, 2009 at 1:39 PM
yin yin ဘီယာက သောက်လို့ကုန်သွားလို.ဓတ်ပုံမရိုက်လိုက်ရဘူး။ရွှေကြည်လည်းထိုနည်းလည်ကောင်း။